Ubude neMpi uchungechunge iminyaka eminingi ithandwa kakhulu phakathi isu wezindlela. Yena kubhekwa, kanye umsunguli we uhlobo - uyisikhathi eside kulezi imidlalo, kwadingeka tactically yokuphendula lo umsebenzi phambi kwakho. Aninalo isizinda, njengoba esezingeni isu umdlalo, lapho amayunithi zavezwa - lapha unikezwa inombolo ethile amasosha namanye amayunithi yezempi, futhi lokho udinga ukushayela ezimweni ezithile. Njengoba leli gama lisikisela, siyingxenye yochungechunge ngokuthi eRoma, iyalandisa zezwe lasendulo ukuze abadlali, ukunikela ukuthatha indima umlawuli wamaRoma. Yiqiniso, imidlalo ubudala angadingi eziningi amakhompyutha. Lokhu akusebenzi eRoma: Ubude neMpi 2 - nezidingo zomshini abasakwazi okusezingeni eliphezulu kule phrojekthi, kodwa kungenzeka kanjani ukuzithethelela yokuthi ihluzo yemvelo izimpi lapha zingcono kakhulu.
Lo mdlalo nakanjani uyojatshuliswa abadlala, ngoba ezisohlwini izimfuneko ohlelweni, isekela uhlelo Windows XP ezisebenza, okuyinto okwamanje ayenzi neze yimuphi umdlalo kamuva ngesi 2013. Endabeni aseRoma: Izidingo Ubude neMpi 2 System ibukeke kahle enhle. Ngokwemvelo, lokhu kuqhathanisa nalabo amaphrojekthi evelayo parallel lo mdlalo. Kodwa uma siqhathanisa nge imidlalo odlule yochungechunge, lapha kukhona ngempela isinyathelo esikhulu phambili. Ngakolunye uhlangothi, lokhu kuyinto enhle, njengoba umdlalo isibe ongokoqobo, wafika amathuba amaningi. Kodwa ngakolunye uhlangothi, abanikazi ungeyena computer anamandla kakhulu ngeke bakwazi ukusebenzisa iphrojekthi, ukuthi, yebo, uphatheke kabi. Angikholwa ukuthi abanikazi Windows XP angakwazi ukukhokhela PC ukumisa, okuyinto Kuzoxoxwa. Phela, eRoma: Izidingo Ubude neMpi 2 System akuzona ethethelela - awukwazi ngisho ukubheka ubuncane, njengoba ungenaso usathola kutitfokotisa inqubo.
Ukuze agijime lo mdlalo, udinga processor ezimbili-core nge imvamisa okungenani 2 GHz - kodwa kungcono ukuthi kwaba okungenani 2.6 GHz, ukuthi kwakuyinto nhlobo ukukwenza. unyathela amabhuleki njalo kanye nokuntuleka kwamathuba ngabo kahle ukulawula amaviyo akho wena cishe yiyo. Nokho, uma kubalulekile ukuba sibheke ukuthi kulesi sici eRoma: Izidingo Ubude neMpi 2 zesistimu umdlalo izilungiselelo esiphezulu. Kunconywa ukuba kungekho ezimbili-core futhi isikwele-core processor eno imvamisa esivezwe ngenhla, bese ungakwazi ukuqeda zonke izimbungulu ezimbi futhi Ukwehla e umdlalo Ubude neMpi: Rome 2 PC. kokukhululwa date, izidingo zohlelo, ukwesekwa amadivayisi okokufaka - konke ukwaziswa okubalulekile. Kodwa uma umdlalo ngeke ube ukusebenzisa, asikho isizathu ukwazi okwengeziwe.
Isibaluli ebaluleke kakhulu kukhompyutha yakho ukuthi unesibopho yokuqala kanye ukusebenza evamile like imidlalo ye-computer, nezinye izinhlelo - kuyinto inkumbulo. Ngamunye uhlelo egijima ithatha ingxenye ethile memory ngenkathi umsebenzi, kanti uma unanoma sekwanele inkumbulo, i-computer uqala sokuhudula izinyawo lesi. Ukuze ngokuphephile nangokuvikeleka ukusebenzisa le game, udinga okungenani ezimbili gigabytes RAM - ezisebusweni at Ubude neMpi: Rome 2 Izidingo zesistimu. Gaming News, yebo, manje ngokumemeza okungakho akazange ukuxoxa le phrojekthi, ngoba kwadingeka nezinye izihloko, ezifana, Watch Dogs noma entsha okukhipha Call of Duty, okuyinto bayishaya yonke izimfuno zabo eqolo. Kodwa namanje kuwufanele nikhumbula ukuthi uma ungenayo ezimbili gigabytes RAM, ngeke kube khona ithuba lokudlala kuleli su. Futhi ukuze uthole ukujabulela esiphezulu, udinga ukuba gigabytes okungenani ezine RAM. Kwakufanele kuthi lapho imemezele Izidingo zesistimu Ubude neMpi: Rome II, abalandeli yochungechunge nabo abazange bajabule kakhulu, kodwa ngokushesha washiya isikhundla sakhe - kodwa intuthuko kuyindlela engcono nganoma yisiphi chungechunge, futhi konke has wentengo.
Akekho wamangala ukuthi lemali edingekayo inkumbulo elilingana 512 wamamegabhayithi - I-2013, lapho waphuma lo mdlalo, kwaba izinga evamile. Ingabe asidingi abathuthukisi kanye angaphezu kwavamile kulabo abafuna ukusebenzisa isu phezu kulungiselelwa eliphakeme. Bamane kudingeka siqiniseke ukuthi ikhadi yabo yayingenamhlabathi engaphansi gigabyte inkumbulo ividiyo - ke izinkinga akufanele kube ngaso sonke. Njalo Kuhle ukukhumbula ukuthi uhlelo olusha uchungechunge ingxenye ingcaca lingaphezulu kakhulu kunangaphambili, ngakho-ke kuhle ukuzama ukudlala okungcono amaphrojekthi amasha kukhompyutha yakho ukuze uqinisekise ukuthi uyalithola eziningi esiqala emihle, kunokuba kwabhoboka lag futhi babamba zonke izinyathelo.
Hard drive isikhala
Lo mdlalo kuzothatha gigabytes amathathu kwi-hard disk, ngakho kulungele salokhu kusengaphambili - abangu ukusula indawo, ngakho ungakwenzi ezisheshayo. Nge ukufakwa Akuvamile ukuba yinkinga, kusukela ungakwazi ukuthi njalo ubone kangakanani umdlalo senzeka ngaphambi kokuqala ukuyifaka. Ngesikhathi esifanayo, ezimweni eziningi, uhlelo umane ayikuvumeli ukuqala ukufakwa, uma disk akhethiwe ngeke anele lesi sikhala. Kodwa kukhona izinkinga ne kwethulwa, okungase kwenzeke ngenxa yokuthi akukho isikhala esanele-disc. Ngakho landela imiyalelo ngokucacile - uma ufuna ukukhulula 30 GB, khona-ke kumelwe kwenziwe, ngaphandle kwalokho umdlalo ngeke ukufaka noma ngeke ukuqala.
Imfihlo kuphela namanje ofukamela umdlalo Ubude neMpi: Rome II - idethi. Izimfuneko zesistimu aziwayo kakade kuwe, ukuze ungakwazi ukutshela futhi mayelana lokuthi le phrojekthi yavela emhlabeni. Septhemba 3, 2013 - usuku ukukhululwa kwe-game-Windows. Ukuze OS Kwathi ncamashi Ngemva konyaka, ngo-September 3, 2014.
Njengoba e "Maynkraft" ikati ezinokuthula futhi kungani lokho?
"Lego Pirates zaseCaribbean.": Umdlalo edlulayo. "IPirates zaseCaribbean": aphambe
Sabefundisi - iyona ebaluleke kakhulu indawo elawula uhlelo
Self-portrait ngu Tintoretto - isampula Umdwebo workshop
Alexander Negreba: amabhayisikobho, izindima yaseshashalazini kanye ifilimu, umsebenzi wokubhala, umsebenzi umqondisi sika
"Clomid" sawo esiningi: ukusetshenziswa, side effects